Mandoa ve ny alika ary mivalana ra | Tontolo alika
Mandoa toy ny fivalanan'ny alika dia dingana izay fahita amin'ny fomba iray ary amin'ny tranga sasany dia mety ho antony mahatonga ny tompony hahatsapa fanahiana izy ireo, indrindra raha tsy mihena ireo, ny fisehon'ny rà dia mivoaka na amin'ny loaka na amin'ny seza na raha voalaza fa lasa matotra kokoa ny sary ara-pahasalamana rehefa miaraka amin'ny soritr'aretina hafa toy ny tsy fahitan-tory, tsy fahitana lisitra na tazo.
Noho io antony io no nitondranay ny fampahalalana ilaina hazavao ny antony mandoa ny zanako kely ary mivalana miaraka amin'izay.
Mba hanazavana ny antony mahatonga ny alika mandoa sy mivalana, ny mahazatra indrindra dia ny fifantohana amin'ny rafitra fandevonan-kanina, satria ny antony mahazatra indrindra an'io karazana fikorontanana io dia matetika avy amin'ny olana amin'ny gastrointestinal, izay amin'io fomba io dia misy fiantraikany amin'ny vavony, ny tsinay lehibe na koa ny tsinay kely, izay miteraka fiovana sasany amin'ny fisehoana izay matetika mandoa na fivalanana.
Tena ilaina izany mahita fahasamihafana eo amin'ny fandoavana sy ny fandrorana, satria amin'ny tranga voalohany dia rehefa misy ezaka ary hitantsika ny fihetsika ao amin'ny faritry ny kibony, fa amin'ny lafiny iray hafa kosa rehefa mitranga ny regurgitation dia mivoaka mora foana ny sakafo na koa ilay ranoka.
Amin'izany fomba izany dia zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fivalanana dia ireo fivalanana izay matetika mitranga matetika ary be ranoka, ary izy io kosa dia afaka manavaka ny lalan-dra mora foana.. Rehefa ra vaovao no hita ao amin'ny fipetrahana, dia antsoina hoe hematochezia.Mandritra izany fotoana izany, ilay efa levona, izay mazàna manana feo maizina kokoa, dia antsoina hoe mana.
Zava-dehibe ny hitandremantsika tena amin'ny tsirairay amin'ireo toetra ireo, satria rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy manome ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny mpitsabo biby isika mba hahafahany manome diagnostika, ary avy eo hitantana ny fitsaboana marina.
Ny zava-misy mandoa ny biby fiompintsika indraindray na rehefa mivalana koa izy nefa tsy mila maneho soritr'aretina hafa ary manana ny mety hitazomana ny toe-pony ho mailo, dia tsy zavatra tokony hanahirana antsika., fa rehefa miseho matetika ireo fizarana ireo ao anatin'ny fotoana fohy na matetika mitranga miverimberina ao anatin'ny herinandro na volana vitsivitsy dia antony iray hitondrana ny alikanay eo imason'ny mpitsabo biby izany, ary koa rehefa mampiseho soritr'aretina hafa ankoatr'izay izay nohazavainay.
1 Ny antony lehibe mahatonga ny mandoa sy ny fivalanana
1.2 Ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo
1.3 Allergie sakafo na tsy fahazakana
1.5 Ireo aretina ifotony
1.6 Amin'ny alàlan'ny sakana
1.9 Noho ny adin-tsaina
2 Mandoa ra sy mivalana
3 Inona no hatao raha mandoa ny alika ary mivalana?
4 Fitsaboana ny alika mandoa sy mivalana
5 Rehefa mandoa alika kely ary marary ny fivalanana
6 Ahoana ny fomba hisorohana an'io olana io
Ny antony lehibe mahatonga ny mandoa sy ny fivalanana
Miaraka amin'ny fampahalalana ilaina, ny fanadinana ilaina ary ny fitsapana tsirairay izay heverina fa ilaina, ny mpitsabo biby dia iray izay ho afaka hamaritra amin'ireo antony marobe isan-karazany izay afaka manazava ny fisehoan'ny mandoa sy ny fivalanana. Na izany aza, azontsika lazaina ny mahazatra indrindra:
Inona izany ateraky ny bakteria, viriosy na protozoaAnisan'ireo soritr'aretina amin'ireny ny mandoa ary koa ny fivalanana ary mila fitsaboana omen'ny mpitsabo biby izy ireo.
Ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo
Rehefa alika mazàna dia manana fironana misakafo tafahoatra, izay misy koa ny sakafo na vokatra hita ao amin'ny sisan-tavela navelan'ny olombelona tamin'ny fanjifany na ny fako ary na dia teo aza ny fiomanana amin'ny vavonin'alika afaka hikirakira singa azo hanina sasany, dia fahita matetika izany raha ny farany ny fivalanana ary koa ny fandoavana izay matetika milentika tampoka.
Allergie sakafo na tsy fahazakana
Amin'ity karazana tranga ity hitantsika ny fisian'ny mandoa ary koa ny fivalanana amin'ny fomba mitaiza, ankoatry ny fiarahan'izy ireo soritr'aretina hafa, toy ny mangidihidy.
Es fanaraha-maso ilaina ilaina, fa ny fitsapana ilaina rehetra dia natao ho an'ny alika amin'ny alika ary ny fampiharana sakafo hypoallergenic dia ampiharina.
Ny fanafody sasany dia mety miteraka aretina mandevona izay mety miteraka fivalanana ary koa mandoa. Zava-dehibe ny manondro ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny mpitsabo biby antsika rehefa alain'ny fanafody ny alikantsika, ary koa tsy maintsy omentsika ny anaran'ny fanafody sy ny fatra.
Ireo aretina ifotony
Amin'ny tranga sasany dia misy ny aretina toy ny sasany aretin'ny voa, izay mampiseho ho ampahany amin'ny vokany eo amin'ny vatana ny fisian'ny mandoa sy fivalanana.
matetika dia voamarina amin'ny alàlan'ny fitsapana ra ary ny tsirairay amin'ireo soritr'aretina ireo dia mihena ny fiheverana ny fomba fifehezana ny aretina.
Amin'ny alàlan'ny sakana
Rehefa alika ny alika dia mahazatra azy ireo ny mihinana zavatra iray, toy ny taolana na kilalao tonga any miteraka sakana amin'ny faritra sasany amin'ny rafi-pandevonan-kanina. Amin'ny tranga sasany izay mety hiteraka fahasimbana ilay zavatra voalaza ary tsy atolotra azy hivoaka irery, ny fomba tokana hanesorana azy dia amin'ny alàlan'ny fandidiana.
Ny zava-misy amin'ny fihinanana sakafo sasany dia mety hiteraka fanapoizinana any soritr'aretina lehibe dia ny fivalanana ary koa ny fandoavana. Ireo karazana olana ireo dia matetika avy amin'ny vonjy taitra biby, izay manimba ny ain'ny biby fiompintsika ihany koa.
Rehefa matotra loatra ny trangan'ny katsentsitra na rehefa mitranga izany amin'ireo biby mora tohina dia azo atao ny mandinika mandoa ary indrindra ny fivalanana. Ny manam-pahaizana manokana rehefa mandinika santionany amin'ny seza, manana ny fahaizana mamaritra izay karazana katsentsitra mahatonga ny olana ary noho izany, hotaterina ny fanafody voalaza.
Rehefa eo amin'io fotoana io isika dia tena zava-dehibe ny manondro ny fotoana ahafahana manao mametraka fandaharam-potoana ho an'ny deworming araka ny tokony ho izy.
Noho ny adin-tsaina
Amin'ny tranga maro an'ny adin-taolana kaninina tena matotra na rehefa maharitra mandritra ny fotoana maharitra, ny alikantsika dia mety hijaly amin'ny fandoavana ary koa ny fivalananaNoho izany dia ilaina ny mangataka ny fanampian'ny veterinera manam-pahaizana manokana.
Mandoa ra sy mivalana
Araka ny efa nohazavainay, ra ao anaty seza dia mety hiseho vaovao na levona ary arakaraka ny tranga inona no misy, dia mahazo anarana hafa izy. Ity dia iray amin'ireo antony manampy antsika hahafantatra ny antony, izay manamora kokoa ny manazava ny fandoavana sy ny fivalan-dra.
Rehefa madio ny rà dia midika izany fa miresaka isika a toe-javatra ao amin'ny faritra anatiny ny rafi-pandevonan-kanina, fa raha efa levona io dia azo inoana fa avy amin'ny vavony, ny tsinay kely na koa mety avy amin'ny lalan-pisefoana izay miafara ao anatin'ny rafi-pandevonan-kanina rehefa mitelina.
Etsy ankilany, ny fisian'ny mandoa dia famantarana izay milaza amintsika fa izy koa dia a aretin-kibo.
Inona no hatao raha mandoa ny alika ary mivalana?
Angamba ity no fanontaniana lehibe napetrakao tamin'ny tenanao ary maninona ianao no tonga eto mitady fanampiana amin'ny toe-javatra mampalahelo sy tsy mahazo aina izay ahitanao ny tenanao. Ary hiezaka ny hanampy anao araka izay tratra izahay, na dia ny zavatra voalohany anoroanay an'io aza dia antsoy ny mpitsabo biby ary manatona azy (Io no fomba tsara indrindra ahazoana valiny matihanina).
Raha ny voalaza dia rehefa mandoa sy mivalana ny alika dia mandalo dingana maromaro. Mety ho malefaka, antonony na mafy. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy matotra izy io, ary mety ho tsotra ny antony, noho izany ny tsy misakafo mandritra ny 3-4 ora, na 24 ora aza, tsy misy zavatra hitranga raha misotro rano matetika ianao mba hijanona ho hydrated.
Rehefa lasa ireo ora ireo dia afaka manome azy ianao sakafo manjavozavo hahitanao ny fandeferanao. Raha tsy mandoa na mivalana izy dia mety efa nandalo izany, na dia nanoro hevitra anao izahay mba hanohy hanina mandritra ny andro vitsivitsy handinihana ny alika raha hahita azy io indray.
Raha tsy izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny «vet» ianao satria, raha vantany vao vita ny "madio" amin'ny vavony, dia mbola manana olana ihany ilay biby, dia mety noho ny antony hafa.
Mandeha tsy ilazana izany fa, raha eo am-piandrasana ny biby fiompinao dia lasa tsy mitahiry lisitra kokoa, dia manintona kokoa, mitaraina ... na manana fihetsika tsy mahazatra azy na mampihemotra anao, dia antsoy ny mpitsabo biby.
Fitsaboana ny alika mandoa sy mivalana
Betsaka ny fitsaboana amin'ny fitsaboana ny alika mandoa amin'ny fivalanana. Ny sasany dia voafaritra manokana amin'ny veterinera, toy ny fanafody, saingy misy ny fitsaboana ao an-trano izay, mandritra ny fiandrasana, dia azo andramana ary tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny toetran'ny biby fiompinao.
Iray amin'ireto fanafody azonao andramana ireto ny atsofohy ao anaty rano fisotroanao, pinika bicarbonate iray. Mila manandrana misotro isaky ny 1-2 ora ianao ary isaky ny mila manomana an'io fanafody io ianao. Fa maninona ny bikarbonate? Satria izy io dia mampitony ny vavony ary mifehy ny asidra. Ankoatr'izay, raha mbola tsy tafahoatra amin'ny habetsany ianao, dia tsy zavatra handratra ny alika, fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Safidy iray hafa, miaraka amin'ny rano ihany koa ny manomana fampidirana chamomile sy sakamalao. Andraso hangatsiaka izy dia omeo hosotroiny fa tsy rano. Misy ny alika mahazaka azy tsara, ary ny hafa kosa, noho ny fofona tsotra, dia tsy te hisotro azy. Ireto misy azo atao roa: ny iray hanesoranao azy ary handenao azy; na terena kely izy ary, miaraka amin'ny syringe, omeo ilay fampidirana amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao am-bavanao. Raha hitan'ny biby fiompinao fa manamaivana azy izany, dia azo inoana fa hiafarany misotro azy irery amin'ny farany.
Ny dite peppermint koa dia fomba iray hafa ahafahana "mandamina" ny vavonin'ilay biby ary manampy amin'ny fanalefahana izay fanaintainana mety tsapany. Toy izany koa, ny chamomile misy anise dia mety ho fomba iray hafa hanomanana fampidirana.
Ary farany, ary na dia tsy tena hisy akony aza ny sary mitohy amin'ny alika mandoa sy mivalana be loatra, dia afaka manampy anao hisoroka toe-javatra hafa koa. Miresaka momba ny fampiasana ny probiotika amin'ny sakafonao, na amin'ny kapsily, amin'ny ranoka na amin'ny sakafo.
Amin'ny tranga ny mpitsabo dia ny zavatra mahazatra rehefa mandeha boaty toy izany ianao dia ny mametraka sasany fanafody antidiarrheal na antiemetic. Tena mandaitra izy ireo ary ny marina dia hitanao izy ireo ho bismuth subsalicylate na ilay fantatra amin'ny hoe famotidine. Ankehitriny, ilaina izany raha omen'ny mpitsabo biby satria, na dia fanafody fandevonan-kanina diso tafahoatra aza izy ireo, izay manampy ny vavony, dia tsy mety ny mitsabo tena ny biby fiompinao.
Rehefa mandoa alika kely ary marary ny fivalanana
Ny alikakely, raha ny tena izy, dia manana olana lehibe kokoa raha mandalo sary mandoa sy mivalana izy satria mety hisy fiantraikany eo aminy indrindra izany ary miteraka lolompo. Noho izany dia tsara ny fanaraha-maso akaiky ny biby amin'ny lafiny rehetra: sakafo, fahadiovana, tontolo iainana ... hialana amin'izany.
Rehefa alika kely sy mandoa ny alika kely dia izay lasa tsy ampy rano haingana kokoa noho ny santionan'ny olon-dehibe. Ary izany dia vokatry ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'izy ireo, izay mamela azy ireo misokatra amin'ny aretina maro hafa na katsentsitra hafa izay mety hisy fiantraikany amin'izy ireo ary mampitombo ny toe-javatra iainany.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitazonana ny fandaharam-potoana fanaovana vaksiny sy ny fizahana, ho fanampin'izay, raha manomboka mandoa sy mivalana ny alikanao dia ny tsara indrindra azonao atao tsy miandry na dia 24 ora, dia ny fitondrana azy any amin'ny mpitsabo biby. Amin'izany fomba izany, raha zavatra matotra izy io dia mety ho tratra ara-potoana ary hanamaivana ilay biby farafaharatsiny.
Ahoana ny fomba hisorohana an'io olana io
Alohan'ny hamaranana azy, ary fantatray fa raha vao mandalo an'ity toe-javatra ity ianao, ny kely indrindra tadiavinao dia ny famerenanao azy, hamela torohevitra vitsivitsy izahay hanampiana ny biby fiompinao tsy handoa sy hivalana indray.
Anisan'ny azonao atao ny manaraka:
Zahao ny sakafon'ny biby fiompinao. Tokony ho hitanao raha mety indrindra aminy io ary raha tsy miteraka sary miverimberina rehefa mandeha ny fotoana, dia ny mandoa sy mivalana. Raha izany dia ovao ny sakafonao.
Aza avela hisakafo any ivelan'ny trano ny alikanao. Ao amin'ny fako, rehefa mandeha mitsangatsangana ianao, ary na dia avy amin'ny olon-kafa aza. Tokony hataonao zatra ny zava-misy fa ianao ihany no manome sakafo azy, satria, amin'izay, ho fantatrao fa tsy hihinan-javatra na inona na inona amin'ny toe-javatra ratsy na manimba ny fahasalamany izy.
Aza entina mamakivaky faritra maloto be io. Halaviro hatrany ireo toerana maloto na tsy karakaraina firy satria mety ho akany misy aretina, kongona, katsentsitra sns. hanimba ny biby fiompinao izany.
Fahadiovana hatramin'ny farany ambony. Mifandraika amin'ireto voalaza etsy ambony ireto dia mila mitandrina ihany koa ianao fa voakarakara tsara ny alikanao mba tsy hifindran'ny aretina mahazo azy.
Aza mihinana izay tsy tokony ho anao. Ohatra ny kilalao azonao potehina ary izany, na fahatsiarovan-tena na tsy fahatsiarovan-tena dia hiafara hitelina azy ireo, satria mety ho antony mahatonga ireto mandoa sy mivalana ireto (ankoatry ny tsy maintsy mandeha any amin'ny mpitsabo dia manatanteraka fandidiana).
Fahano tsikelikely izy ny sakafo. Izany dia ho an'ireo alika be fanina indrindra, satria maro amin'ireo olana mahazo azy ireo sy ny antony mandoa na mivalana izy ireo dia satria misakafo haingana loatra. Fa raha tokony hanome ny sakafo rehetra indray mandeha ianao dia mizara azy dia hataonao lasa ilay olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fa maninona ny alika no mandoa ka mivalana
daisy calderon dia hoy izy:
Raha ny ra dia madio miaraka amin'ny moka kely. Alika izy ary 11 taona.
Mamaly an'i margarita calderon
Thelma Garcia dia hoy izy:
Inona no azoko omena ny alika ananako manana 2 andro amin'ny fandoavana sy fivalanana mihosin-dra ary efa natahotra ahy izy fa tena devoly
Mamaly an'i Thelma garcia
Anderson-veterinera dia hoy izy:
Zava-misy mahaliana tokony ho fantatsika fa ny fandoavana hematic dia iray amin'ireo izay miteraka ahiahy indrindra eo amin'ny mpikarakara, indrindra fa ra rehetra no mandoa. Indraindray, alika mandoa ra avy amin'ny zavatra tsotra toy ny ratra amin'ny siligaoma na ny lela, na izany aza, ny olana lehibe kokoa dia mety ao ambadik'io karazana mandoa io ihany koa. Fahasalamana sy fitsaboana ny fandoavana alika amin'ny alika, Misaotra betsaka, lahatsoratra tsara
Valiny tamin'i Anderson-Veterinarian
Impiry isan'andro aho no tokony hamoaka ny alikako?